Taksiborosy Karandalana tra-doza: mpandeha sivy maty, maro no naratra mafy | NewsMada
Namoa-doza indray ny taksiborosy kamiao, irony antsoina hoe Karandalana irony, ny alahady teo, tao Andavakankiho, kaominina ambanivohitra Bezaha, distrikan’i Betioky Toliara. Mpandeha sivy be izao no indray namoy ny ainy, ankoatra ireo naratra mafy, vokatry ny fivarinan’ity fiara ity tany rano misy harambato.
Nandriaka indray ny ra! Olona miisa sivy indray maty raha 27 kosa ireo naratra mafy vokatry ny fivadihan’ny taksiborosy kamiaobe TRM Saviem 4 000 Karandalana iray raha iny nidim-pidinana ao Andavakankiho, fokontany Sakamalio, kaominina ambanivohitr’i Bezaha, distrikan’i Betioky Atsimo, afakomaly tamin’ny 5 ora hariva. Araka ny fampitam-baovao voaray, nitondra mpiantsena sy mpitondra vokatra avy ao Bezaha ilay taksiborosy ary tra-doza tampoka. Vokany, mpandeha miisa sivy indray maty tsy tra-drano raha 27 hafa kosa naratra mafy, araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny zandary. Voalazan’ireo mpandeha sasany avotra tamin’ity lozam-piarakodia ity fa tapaka hisatra ilay taksiborosy nefa nidina fidinana ka nivarina avy hatrany tany anaty harambato misy rano eo Andavakankiho ny fiara. Misy loharanom-baovao hafa kosa anefa milaza fa miisa 11 ireo olona namoy ny ainy tamin’ity loza ity. Antony iray hafa nahatonga ny loza koa, nihoatra tsy araka ny lanja tokony ho izy intsony, ny entana sy ny olona nentin’ilay taksiborosy Karandalana satria ankoatra ireo mpandeha miisa 50 tao anatiny, nitondra tsaramaso 80 gony sy entana maro samihafa teo amin’ny fitoeran’entana izy ity. Tsy zakan’ny fiara intsony, araka izany, ny lanjan’ny olona sy ny entana nentiny ka nampivadika ity taksiborosy ity. Nivadika avy hatrany ny fiara rehefa tsy voafehin’ny mpamily intsony teo am-pidinana. Maty voatsindrin’ny fiara sy ny entana avokoa ny ankamaroan’ireo mpandeha namoy ny ainy ireo. Teo koa ireo naratra mafy ary isan’ny nampanano sarotra ny famonjena ny tsy fahafahan’ireo mpandeha nivoaka avy ao anaty fiara satria noho ny fahaterena.
Tazonina anaovana famotorana ny mpamily…
Nampihoronkoditra ny nahita ny fatin’ireo niharam-boina niampatrampatra sy voatsindrin’ny entana tao ambanin’ilay kamiaobe taksiborosy. Nalefa haingana any amin’ny Hopitaliben’i Toliara kosa ireo olona miisa fito naratra. Fantatra fa atahorana ny ain’ireo mpandeha sasany noho ny ratra nahazo azy ireo. Tonga haingana teny amin’ny toerana nitrangan’ny loza ny zandary ao amin’ny borigadin’i Bezaha nanao fanadihadiana sy nanampy tamin’ny famoahana ireo mpandeha tavela tao anatin’ilay taksiborosy ary nandefa azy ireo any Toliara. Efa nanaovana fanadihadiana koa ny tompon’ity kamiaobe taksiborosy Karandalana namoa-doza ity. Tazonina ao amin’ny borigadin’i zandary ao Bezaha ilay mpamily namoa-doza.
Matetika amoizana ain’olona hatrany itony taksiborosy kamiaobe avadika ho fitateram-bahoaka itony, indrindra any amin’ireo faritra saro-dalana. Eo aloha ny tsy fanajana ny fenitra takin’ny asa fitaterana olona miampy ny fitondrana entana. Tsy afa-manoatra anefa ny mponina any amin’ireny faritra ireny satria ireny ny fiara fitateram-bahoaka sy misy any an-toerana. Tokony hojeren’ny fanjakana akaiky ny fanamboaran-dalana satria lasa sorona hatrany ny olona tsy manan-tsiny sa iandrasana fampielezan-kevitra indray vao hita ireny toerana saro-dalana ireny?